PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-12-02 - NGIBONGELA UKHUZANI NOMTHANDENI
NGIBONGELA UKHUZANI NOMTHANDENI
Ilanga langeSonto - 2018-12-02 - Imibono -
MHLELI, emhlabeni singabantu siphila nezinhliziyo ezingafani futhi lokho kumele sikwamukele. Kungaba yiphutha ukuba ngingabongela umculi oyedwa phakathi kukakhuzani Mpungose nomthandeni (igcokama Elisha) Manqele.
Ngenhlanhla-ke ngiyawulalela kakhulu umculo walezi zinsizwa, futhi umnandi. Angizukwanda kakhulu ngoba la kumaskandi ngiyazi ngingazi- thola sengithukeka nje. Igcokama lishaye igolide ICD ingakaphumi, okuwumlando lokho. Ukhuzani uthathe indondo yomculi ovelele noma othandwa kakhulu emzansi jikelele okuwumlando futhi nawo lowo.
Bafowethu, nginifisela ukukhula okukhulu kunalokhu eniyikhona, niwuthathe umculo wakithi niwubeke ebalazweni. Ngicela nihloniphe abalandeli hhayi benu nje kepha bonke.
Ngicela futhi nithi uma nicula nazi ukuthi akusibona bonke abantu abaphila kahle. Ngifisa ukugqugquzela namaciko akithi, emnambithi, afufusayo okolodo likabafanyana, Vezuthando kavezuthando, oxoshamavaka, nabafana bethokozisa ukuba athathe okuhle kulezi zinsizwa (Khuzani negcokama).
Mpha Omnyama Shabalala EMNAMBITHI